News - Balanbaalis balanbaalis tijaabooyin iyo habab xalinta dhibaatada
Imtixaanka balanbaalis balanbaalis iyo hagaajinta:
1. Balanbaalis balanbaal waa buug, pneumatic, Haydarooliga, iyo qayb koronto oo si adag loo jajabiyay kahor intaysan ka bixin warshada. Markaad dib u eegayso waxqabadka shaabadaynta, isticmaaluhu waa inuu si siman u hagaajiyaa labada dhinac ee laga soo galo iyo meesha laga baxo, la xidho waalka balanbaalista, oo cadaadis la saaro dhinaca marinka laga galo. La soco haddii ay jiraan wax daadanaya oo ku yaal dhinaca dibadda. Kahor baaritaanka xoogga dhuumaha, saxanka saxanka waa in la furaa si looga hortago dhaawac soo gaara labada xirmo.
2. In kasta oo Diyue uu soo maray kormeer adag iyo tijaabooyin kahor inta uusan ka bixin warshadda, waxaa sidoo kale jira alaabooyin qaarkood oo si otomaatig ah u beddelaya meertada ay ku kala wareegayaan inta ay ku guda jiraan gaadiidka, una baahan dib u habeyn, pneumatics, hydraulics, iwm, fadlan tixraac tilmaamaha hawlgalka ee qalabka wadista taageeraya. .
3. Faallooyinka furitaanka iyo xidhitaanka ee habka xakamaynta ayaa la hagaajiyay markii korantada wadista baalka balanbaalisku ay ka baxdo warshadda. Si looga hortago jihada qaldan marka korantada la daarayo, isticmaaluhu wuxuu marka hore korontada ugu daarayaa qeybta kala-furanka kadib markii uu korontada daarayo markii ugu horeysay, ka dibna wuxuu riixayaa qalabka korontada si uu u hubiyo in jihada saxanka tilmaamuhu wuxuu waafaqsan yahay jihada xirida waalka.
2. Ciladaha guud iyo hababka tirtiridda filtarka balanbaalis:
1. Kahor intaadan rakibin waalka balanbaalis, xaqiiji in waxqabadka baalka balanbaalisku iyo fallaarta jihada socodka dhexdhexaadka ah ay la jaan qaadayaan xaaladaha dhaqdhaqaaqa, iyo in daloolka guilong ee Guilong la galiyo lana nadiifiyo. Lama ogola in arrimo ajnabi ah lagu xidho giraanta wax lagu xidho iyo saxanka balanbaalisku. Lama ogola in la xiro saxanka balanbaalis si looga fogaado waxyeelo soo gaadho giraanta wax lagu xidho.
2. Waxaa lagugula talinayaa in aad u isticmaasho flange-ga gaarka ah ee waalka balanbaalista, taas oo ah, nooca HGJ54-91 flange steel alxanka alxanka si loogu rakibo saxanka saxanka.
3. Mawqifka ugu fiican ee rakibaadda waalka balanbaalka ee dhuumaha waa rakibaadda toosan, laakiin ma ahan hoos u rogis.
4. Qulqulka waalka balanbaalisku wuxuu u baahan yahay in la habeeyo inta la isticmaalayo, waxaana xakameynaya sanduuqa maaddada dixiriga ah.
5. Qalabka waalka ee leh tiro badan oo furitaan iyo waqtiyo xiritaan, furi daboolka sanduuqa geedka dixirka qiyaastii laba bilood si aad u hubiso in subagga uu caadi yahay iyo in kale. Hayso qadar saxan oo subag ah.
6. Hubi isku-xirnaanta qayb kasta oo xiriir ah, taas oo aan kaliya hubinaynin dabeecadda u ekaanta shinnida ee xirxirida, laakiin sidoo kale waxay hubisaa wareegga dabacsan ee jirridda waalka.
7. Badeecada baaldiga baaldiga leh ee birta ku xiran ayaan ku habboonayn rakibidda dhamaadka dhuumaha. Haddii ay qasab tahay in la rakibo dhamaadka dhuumaha, waa in la rakibo meel laga baxo si looga hortago in giraanta shaabadu culays badan la saaro oo aan la is-taagin.
8. Valve rakibidda wiishka oo isticmaal jawaabta Xilliga ka mid ah hubi saameynta isticmaalka qalabka, oo isla markiiba ka saar wixii cillad ah ee la arko.
3. Hababka looga takhaluso waqtiga ee guuldarrooyinka suurtagalka ah waxaa lagu faahfaahiyay jadwalka soo socda: Sababaha suurtagalka ah ee ka-hortagga guuldarrooyinka Habka baabi'inta Dheecaanka dusha sare 1. Saxanka balanbaalis iyo dusha sare ee dusha sare waxaa ku jira qashin
2. Meesha xiritaanka saxanka balanbaalisku iyo dusha sare ee wax lagu xidho sax maahan
3. Dhinaca banaanka waxaa lagu qalabeeyaa boodhadh flange ah oo si siman loo adkeeyay ama aan ku salaysnayn shuruudaha Jaantuska 1. Jihada tijaabada cadaadiska ayaan waafaqsanayn shuruudaha Jaantuska 1.
1. Ka takhalus wasakhda oo nadiifi godka hoose ee waalka
2. Isku hagaaji furitaanka qalabka dixiriga ah ama dhaqaaqa korantada si loo gaaro meesha saxda ah ee waalka. 3. Hubi diyaaradda flange-ga ee sii kordheysa iyo waddanka xoojinaya balka. Waa in si siman loo adkeeya.
4. Riix jihada shaabadda caarada
5. Ka daadashada labada dhinac ee waalka:
1. Goomayaasha shaashadda ee labada dhinac way fashilmaan
2. Isku dheelitirnaanta dheelitirka dhejiska dheelitir la'aanta ama aan la taaban
3. Goomayaasha wax lagu xidho ee sare iyo ka hoose ee giraanta wax lagu xidho waxtar ma leh. 1. Beddel goomaatada shaabadaysan. 2. Adkee baalasha dhejiska (xitaa xoog). 3. Ka saar giraanta cadaadiska ee waalka oo beddel giraanta wax lagu xiro. Go'aanka fashilmay